Min Ai Mon Chan - English to Burmese translator. Translation services in Media / Multimedia
Min Ai Mon Chan
Local time: 23:28 MMT (GMT+6.5)
Services Translation, Subtitling, Interpreting, Website localization, Editing/proofreading, Software localization, Transcreation, Transcription
English to Burmese: DEVELOPMENT CONCEPT
I. DEVELOPMENT CONCEPT
YYY Company focused on creatingamore distinctive, sleek and powerful design while improving
performance and addingawide variety of features to increase convenience, safety and ride
comfort. The concept is best described by XXX model’s Executive Chief Engineer, “Our concept
was to buildatrue SUV that has style and confidence. The XXX model is the outcome of
our continuous efforts to redefine toughness.”
‘Conventional toughness’, for which XXX model is legendary, is about absorbing the physical
stress of the road, the load, and the environment, day after day.
Beyond this, the XXX model seeks to offer ‘advanced toughness’ -anew, additional trait that
goes beyond just physical durability to deliverafun and exciting driving experience that keeps
users eager to challenge their potential every day, be it at work or adventure.
On the outside, XXX model debutsacompelling design to suit the advanced tastes of genuine
SUV buyers while being equipped withacomprehensive list of features appreciated by families
and business owners. Under the skin, the engineering team has ensured that XXX model’s
enhanced all-terrain 4x4 capabilities will satisfy even the most demanding customer.
XXX model has seenamajor refresh in terms of design, comfort, performance and safety.
A completely redesigned SUV that enhances driving confidence on every level, developed to set
a new standard for sport utility vehicles all around the world by excelling in these areas:
Distinguished Design: The exterior was designed with “Tough and Cool” in mind, to express
refinement and innovation that further strengthens the brand value of XXX model -avehicle
revered for its unquestionable reliability and uncompromising ground-covering ability. The new
“Solid Fluidity” design language is created by YYY Company to enhance the XXX model’s
- New XXX model Iconic Side Design
- Auto Bi-beam LED Headlamps
- LED Daytime Running Lights (DRLs)
- Prominent 18” Aluminium Rims
- Power Back Door Translation - Burmese
YYYကုမ္ပဏီသည် သက်သောင့်သက်သာ စီးနင်းနိုင်မှု ၊လုံခြုံဘေးကင်းမှု၊ အဆင်ပြေညက်ညောမှုများ ကိုမြှင့်တင်နိုင်မည့် အမျိုးမျိုးသောလက္ခဏာရပ်များကိုထပ်မံပေါင်းစပ်ကာ ပိုမိုထူးခြားကျစ်လျစ်ခန့်ညားသည့် ပုံစံဒီဇိုင်းများဖြင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရာ၌အလေးအနက်ထားဖန်တီးခဲ့ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏သဘောထား အာဘော်မှာ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနှင့် ဟန်ပန်ထည်ဝါမှုရှိသောစစ်မှန်သည့်SUVများတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်ပါ သည်။ “XXX မော်ဒယ်သည် တောင့်တင်းကြံ့ခိုင်မှုကို ထပ်မံအဓိပ္ပါယ်ဖော်ဆောင်ရန် အစဉ်တစိုက် ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်ခဲ့မှုများမှ ရလဒ်တစ်ခုပင်ဖြစ်ပါသည်။” ဟု XXX မော်ဒယ်၏ အင်ဂျင်နီယာချုပ်မှ အယူအဆ သဘောတရားကို ရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုခဲ့ပါသည်။
အဆင်ပြေညက်ညောသည့်တောင့်တင်းခိုင်မာမှုဟုဆိုလျှင် XXX မော်ဒယ်သည် ဂန္တ၀င်တွင်စရာမည်ပါ ပေသည်။ အကြောင်းမှာ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ကြုံတွေ့ရသည့် ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထား၊ ၀န်ဆောင်မှု၊ လမ်း၏ ယာဉ်အပေါ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများကို ဖြေလျှော့စုပ်ယူနိုင်စွမ်းရှိခြင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ထက်ပိုလွန်၍ xxx မော်ဒယ်သည် အဆင့်မြင့်ကြံ့ခိုင်တောင့်တင်းမှုများကိုပံ့ပိုးပေးထားပြန်ပါသည်။ ရုပ်ပိုင်းကြံ့ခိုင်မှုထက်ပိုလွန်သော ထူးခြားချက် ဖြစ်သည့် စွန့်စားခရီးသွားလာခြင်းများသာမက ၊ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ မောင်းနှင်မှုများတွင်ပါ ပုံမှန်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများကို စိန်ခေါ်နိုင်မည့် ပျော်ရွှင်စရာ၊ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ မောင်းနှင်မှုအတွေ့အကြုံများကိုဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်မှုပင်ဖြစ်ပါသည်။
ထို့အပြင် XXX မော်ဒယ်သည် မိသားစုများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ မှသတ်မှတ်လက်ခံထားသော လက္ခဏာရပ်များကိုတပ်ဆင်ထုတ်လုပ်ကာ စစ်မှန်သော SUV ၀ယ်ယူသူများ၏ သာလွန်သော အကြိုက်တွေ့မှုများနှင့်ကိုက်ညီစေရန် အထူးစိစစ်ကြပ်မတ်ထားသည့် ပထမဦးဆုံးပွဲဦးထွက်မော်ဒယ်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအချက်များအပြင် သာမန်မျှဖြင့်စိတ်တိုင်းကျရန်ခက်ခဲသော ၀ယ်ယူသူများပင်လျှင် ကျေနပ်အားရ သွားစေမည့် XXX မော်ဒယ်၏ အဆင့်မြှင့်တင်ထားသော မြေပြင်အခြေအနေအမျိုးအမျိုးတွင် ကောင်းမွန်စွာ မောင်းနှင်နိုင်သည့် ၄ဘီးယက်စနစ် ကိုလည်း အင်ဂျင်နီယာ အဖွဲ့မှ တိကျစွာ ထည့်သွင်း လုပ်ဆောင် ထား ပေး ပါသည်။
XXX မော်ဒယ်ကို ဒီဇိုင်းဟန်ပန်ထည်ဝါမှု၊ ငြိမ့်ညောင်း၍သက်သောင့်သက်သာဖြစ်မှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် လုံခြုံဘေးကင်းမှုတို့၏ အဓိက စံနှုန်းအဖြစ်တွေ့မြင်ကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပြည့်စုံကောင်းမွန်စွာ ပြန်လည်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော SUV သည် မောင်းနှင်မှု အဆင့်တိုင်းတွင် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီး၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ယှဉ်ပြိုင်မောင်းနှင်နိုင်သောကားများ၏ အဆင့်အတန်းပုံစံဝင်ရန်အဆင့်မြှင့်တည်ဆောက်ထားကာ အဆိုပါကဏ္ဍများတွင်အားဖြည့်မြှင့်တင်ထားပါသည်။
တိကျစိစစ်ထားသော အချိုးအကွေ့ တည်ငြိမ်မှုစွမ်းရည်နှင့် သံသယဖြစ်ဖွယ်ရာမရှိသော ယုံကြည်အားကိုးနိုင်မှုအပိုင်းတို့ကို ပြန်လည်သုံးသပ်တည်ဆောက် ထားသော ယာဉ်တစ်စီးဖြစ်ပြီး XXXမော်ဒယ်၏ အမှတ်တံဆိပ်တန်ဖိုးကို ပိုမိုခမ်းနားကြီးကျယ်စေမည့်ဖန်တီးမှုများနှင့် ပေါ်လွင်ထင်ရှားစေမည့်
” တောင့်တင်းကြံ့ခိုင်ခန့်ညားမှု ”များကိုခံစားရရှိစေသောအသွင်အပြင်များဖြင့်ယာဉ်၏အပြင်ပိုင်းကို ဒီဇိုင်းဆင်ထားပါသည်။
YYY ကုမ္ပဏီမှ XXXမော်ဒယ်၏ ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာ ၀င့်ထည်ခန့်ညားမှုကိုပိုမိုပေါ်လွင်စေမည့် ဒီဇိုင်းဘာသာ စကားလုံးဖြစ်သည့် “Solid Fluidity” “ပုံဆောင်ခဲ၏အရည်ဖြစ်တည်မှု” ကိုတီထွင်ခဲ့ပါသည်။
XXX မော်ဒယ်၏တုနှိုင်းမဲ့ ဘေးဘက်ဒီဇိုင်း
အလိုအလျောက် LED မီးသီးနှစ်လုံးပြိုင် ကားရှေ့မီး
နေ့အချိန်တွင်ထွန်းညှိထားမည့် LED မီးသီးတန်းများ
LED မီးသီးသုံး ကားနောက်မီးများ
ပေါ်လွင်ထင်ရှားမှုရှိသော ၁၈လက်မ အလူမီနီယမ်ကားဘီးခွေများ
Burmese to English: ကန်ထရိုက်လယ်ယာလုပ်ငန်း
Source text - Burmese
တောင်သူများ၏လိုအပ်ချက်များဖြစ်သည့် နည်းပညာသွင်းအားစုနှင့် ငွေကြေးအရင်းအနှီးများ ပံ့ပိုးပေး
နိုင်ခြင်း၊ အရည်အသွေးကောင်းသီးနှံများထုတ်လုပ်လာနိုင်ခြင်း၊ ထွက်ရှိလာသည့်သီးနှံများအား အာမခံ
ဈေးနှုန်းရရှိလာနိုင်ခြင်း၊ သိုလှောင်ရုံများတွင်သီးနှံအပ်ကုန်စနစ်ဖြင့်လက်ခံသိုလှောင်နိုင်ခြင်း၊ အထွက်နှုန်း
တိုးလာ၍ တောင်သူများဝင်ငွေတိုးလာခြင်းစသည့် တောင်သူများနှင့် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များ နှစ်ဦး
အထက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းများအား သီးနှံစိုက်ချိန်အလိုက် မိုးရာသီနှင့် နွေရာသီတွင် တစ်ဆက်စပ်တည်း
ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းဖြင့် တောင်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်
XXX ကုမ္ပဏီ၏ ကန်ထရိုက်လယ်ယာစနစ်တွင်စက်မှုလယ်ယာဝန်ဆောင်မှုများကိုပါ ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်
ပေး၍ စက်မှုလယ်ယာအဖြစ်အသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုများစွာအထောက်အကူပြုလျက်ရှိသည်။
XXX ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်၂၀၁၄ ခုနှစ်နွေစပါးရာသီမှစတင်၍ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ (၈) မြို့နယ်တွင်
ကန်ထရိုက်လယ်ယာလုပ်ငန်းအား စတင်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ရာသီအလိုက် နှစ်စဉ်
ဆက်လက်ပြီး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် မိုးစပါးရာသီမှစတင်၍
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် တွံတေး၊ ကော့မှူး၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်တို့၌လည်းကောင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း
ဒေသကြီး မြောင်းမြမြို့နယ်တွင်လည်းကောင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရွှေဘိုမြို့နယ်တို့တွင် တိုးချဲ့ပြီး
အကျိုးတူကန်ထရိုက်လယ်ယာလုပ်ငန်းအား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ XXX ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်
ကန်ထရိုက်လယ်ယာလုပ်ငန်းကို XXX ကုမ္ပဏီ၏ဆန်စက်များ ASC များကိုအခြေခံ၍ ဆက်လက်တိုးချဲ့
2.Contract Farming Industry
Contract Farming Industry is the main driving factor to develop Myanmar Agricultural Sector. This system can be co-operated by farmers and agricultural business owner to get mutual profits and advantages and that can also fill up the requirements of farmers such as; technical support, capital support, ability to produce qualified fruits and crops, price insurance for agricultural products, Storing at warehouse as farming stock and more productivity and more income.
Those actions can be taken over continuously rainy season and summer and year by year according to the growing season and it leading to get more trust and acquaintance among the farmers and private business owners.
According to the mechanized farming service are fixed in contract farming industry system of XXX company and it gives much supports in changing to mechanized farming.
XXX started the contract farming industry in eight townships of Nay Pyi Taw council area since 2014, summer paddy season and continuing annual activity by seasonally. It also started and expanded in Twantay, Kawhmu, Kun Chan Kone townships in Yangon Division, Myaung-Mya township in Ayeyarwady Division, Shwebo township in Sagaing Division, since the season of rainy paddy season, 2016. Basing on their millers and ASC, XXX going to expand and develop contract farming.
Software Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Microsoft Word, Pagemaker, Powerpoint, SDL TRADOS, SDLX, Subtitle Edit, Subtitle Editor